Abakhiqizi be-Undermount Drawer & Abaphakeli - China Undermount Drawer Slides Factory
Ukunwetshwa okugcwele kwehlisa umgijimi wesilayidi sebhasikidi yocingo
Isingeniso:Ukunwetshwa okugcwele kwehlisa umgijimi wesilayidi sebhasikidi yocingo evame ukusetshenziselwa ukwehlisa amadrowa webhasikidi wocingo. Lolu hlobo lwesikhwama sokusebenzisa isilayidi sokudicilela phansi silungisa okokudonsa okushibilika kwentambo. Umnikazi womshini we-TAIWAI wokunemba okuphezulu, ngomqondo ophakeme wedizayini ithimba lethu elihle kakhulu lobuchwepheshe lakha ngokucophelela i-exquisite and prefect GERISS hardware okuyiyona ndlela engcono kakhulu yezinkampani zefenisha zomhlaba.
Imodeli No .: EUR33U
Isilayidi esintathu esingezansi sentaba yasekhishini yocingo webhasikidi
Isingeniso:Ukwelulwa kathathu phansi ukukhweza ekhishini wocingo webhasikidi wesilayidi kuvame ukusetshenziswa kumakhabethe wocingo webhasikidi. Lolu hlobo lwesikhwama sokusebenzisa isilayidi sokudicilela phansi ukuze ulungise ekhabetheni lezintambo zocingo. Umnikazi womshini we-TAIWAI wokunemba okuphezulu, ngomqondo ophakeme wedizayini ithimba lethu elihle kakhulu lobuchwepheshe lakha ngokucophelela i-exquisite and prefect GERISS hardware okuyiyona ndlela engcono kakhulu yezinkampani zefenisha zomhlaba.
Imodeli No .: EUR33U2